Donald Trump Oo Lagala Cararay Goob Uu Khudbad Ka Jeedinayay Xalay+Daawo Sawirada | Berberatoday.com
Donald Trump Oo Lagala Cararay Goob Uu Khudbad Ka Jeedinayay Xalay+Daawo Sawirada
Reno(Berberatoday.com)-Musharaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa si deg deg ah loogasaaray goob uu kula hadlayay taageerayaasaiisa, kadib markii goobtasai lagu arkay nin laga shakiyay in uu hubeesan yahay.
Ilaalada gaarka ah ee Musharax Donald Trump ayaa garbaha ka qabtay xili uu khudbad jeedinayay waxa ayna u kaxeeyeen goob amaan ah, waxaana mar qura cabsi iyo buuq laga dareemay goobtii uu ka khudbeenayay oo kutaala magaalada Reno ee Gobolka Nevada.
Kala cararka iyo buuqa ka dhashay goobtii uu khudbada ka jeedinayay Musharax Xisbiga Jamhuuriga ayaa timid kadib markii halkaasi lagu arkay nin 33 sano jir ah oo looga shakiyay in uu wato qori uuna dhibaato geesan karo.
Ciidamo badan oo kuwa amaanka ayaa goobta soo gaaray waxa ayna qabteen ninka laga shakiyay iyadoona ugu dambeyn la ogaaday in ninkaasi uusan wadan wax qoray ah balse uu watay boor ay ku qornaayeen hal ku dhigyo uu kaga soo horjeeday musharaxa.
Musharax Xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa markii dambe dib ugu soo laabtay hoolkii lagala cararay, waxa uuna mar kale halkiisa kasii waday khudbadii uu u jeedinayay taageerayaashiisa.